Clickmate Pro Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Sosotra ve ianao amin'ny fanaovana asa mitovy amin'ny fitaovana Android anao? Raha izany ianao dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana, izay fantatra amin'ny anarana hoe Clickmate Pro. Izy io dia fampiharana Android, izay manolotra hampitombo ny faharanitan-tsain'ny fitaovana Android anao. Afaka manao karazana asa ho azy izy io.
Ny rafitra fiasan'ny Android dia iray amin'ireo fitaovam-pifandraisana. Misy mpampiasa finday Android an-tapitrisany manerana an'izao tontolo izao, izay ahafahany manao ny asany mora foana. Io no iray amin'ireo fananana mitsitsy fotoana indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Mifandraisa amin'ny olona, ​​mahita zava-baovao, mahazo sehatra, sy ny maro hafa.
Misy zavatra mahagaga an-tapitrisany maro, izay azonao atao mora foana amin'ny Smartphone rehetra. Misy asa maro, izay matetika mitovy. Tsy maintsy mandalo toe-javatra mitovy imbetsaka ny mpampiasa, mba hanao asa mitovy hatrany hatrany. Noho izany, adinonao ve izany dingana rehetra izany?
Raha tianao izany dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana, izay afaka manao ny asanao rehetra. Afaka mamerina hatrany hatrany ny fampiasanao smartphones rehetra. Io no fampiharana mitsitsy fotoana indrindra, ahafahanao manao asa maro miaraka amin'ny fitaovanao sy ny hafa. Raha sahirana amin'ny fahazoana azy ianao dia mijanòna miaraka aminay ary diniho ny fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba izany.
Topimaso an'ny Clickmate Pro App
Izy io dia rindranasa Android, izay manolo-tena hanatanteraka ny fizotrany fikikisana sy fikosehana. Manolotra ny mpampiasa hiditra amin'ny toerana misy azy io sy ny toerana misy azy ireo, izay hanamboarana ny paompy sy ny famafana. Manolotra rafi-pandraketana efijery koa izy io, amin'izay ahafahanao mamaky mora foana ny efijery iray manontolo.
Ao amin'ny maody Auto, ny mpampiasa dia tsy maintsy manao ny asa rehetra, izay tiany haverina. Ny mpampiasa dia tsy maintsy manao ny dingana manontolo rehefa vita ny dingana. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mamela ny fampiharana hanao ny asa rehetra. Hamerina ny dingana izany.
Izy io dia novolavolaina tamin'ny fomba tsara indrindra, izay manisa ny mpampiasa paompy tsirairay avy nafafaina tamin'ny maody automatique. Haveriny ny dingana rehetra. Zava-dehibe ihany koa ny fotoana satria kajy koa ny fotoana ary hatao amin'ny fotoana tena izy ny dingana rehetra.
Ao amin'ny mode Manual, tsy maintsy manome ny asa rehetra amin'ny tanana ianao. Tsy maintsy mametraka ny tari-dalana ianao, ary inona no hatao manaraka. Mila manome ny tari-dalana ianao, izay ahitana ny fotoanan'ny paompy, ny elanelam-potoana, ny faharetany ary ny antony hafa amin'ny paompy. Toy izany koa ny endri-javatra swipe.
Mety mieritreritra ianao, karazana asa inona no averiko? Fantatrao àry fa misy lalao Android samihafa, izay lalaovinao isan'andro ary anaovanao dingana mitovy amin'ny serivisy samihafa. Ho fantatry ny gamer fa ohatrinona ity fampiharana ity no ilaina ho azy ireo.
Misy ihany koa ny rindranasa karama isan-karazany hita eny an-tsena, izay tsy maintsy andalovan'ny olona asa mitovy amin'izany. Noho izany, amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia afaka miala sasatra mora ianao ary hahazo vola ho anao. Misy zavatra hafa an-taonina, izay azonao atao amin'ny fampiharana ity.
Ao amin'ny firaketana efijery dia manome rafitra fandraisam-peo avo lenta izy io, izay azonao tehirizina ao amin'ny fitahirizanao ny fitaovanao. Tsy manome mari-pamantarana rano izy io, izay matetika no omen'ny mpitam-peo. Misy endri-javatra mahagaga maro kokoa amin'ity fampiharana ity, izay azonao jerena.
Izahay dia manolotra ny kinova pro, izay manome fidirana amin'ny endri-javatra karama rehetra. Noho izany, azonao atao ny misintona ny kinova premium amin'ity pejy ity ary mampiasa azy. Raha manana fanontaniana momba izany ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
anarana Clickmate Pro
Manana tsindry fiara hafa ho anao izahay.
Kitiho Auto sy Swipe
Manitsy ny torolàlana
Fandraisana an-tsary amin'ny kalitao avo lenta
Mark tsy misy rano
Tsy ilaina ny root
Azo jerena eny amin'ny tsena ny kinova ofisialy, saingy mizara ny kinova pro izahay. Ka raha te-hisintona ilay kinova pro ianao dia ampidino eto amin'ity pejy ity. Izahay dia hizara rohy aminareo rehetra ary mila tsindrio fotsiny ny bokotra fisintomana azo alaina.
Clickmate Pro Apk dia afaka mitahiry fotoana betsaka ary azon'ny rehetra ampiasaina, fa indrindra ireo mpilalao sy mpikarama an-tserasera dia afaka mahazo tombony betsaka amin'ity fampiharana ity. Noho izany, alaivo ity fampiharana ity ary mahazo fidirana amin'ireo endri-javatra premium rehetra an'ny fampiharana.
Sokajy Apps, Tools Tags Clickmate Pro, Clickmate Pro Apk, Clickmate Pro App Post Fikarohana